China Gesi Solenoid Kudzivirira Valve Vagadziri uye Vatengesi - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Solenoid valve > Gasi Solenoid Safety Valve
Gasi Solenoid Safety Valve Vagadziri
Gas Solenoid Safety Valveâ€” kunyangwe iwo mabhureki asina infrared tekinoroji mugrill - ave aine infrared rotisseries kweanopfuura makore gumi nematanhatu. Nzvimbo yekupisa mumadziro ekuseri kwegrill yakatwasuka uye inovhenekerwa kune chero mhepo kana mvura inobvira uye saka inoshandisa Safe Valve control panzvimbo yemavharuvhu ekudzora ari nyore anoshandisa zvinopisa zvemukati pasi pemagrill aya. Ivhavhavha yekudzivirira ivharuvhu yekudzora ine solenoid yemukati inovhara kuyerera kwegasi. Solenoid ine chitubu chinotsimbirira paburiro kuti gasi riyerere nepakati pevharuvhu kuitira kuti gasi rimire mukati mezvinodzora. Iyi Gasi Solenoid Chengetedzo Valve ine thermocouple yakasungirirwa kuti ikonzere kuvhura kutendera gasi kuyerera.
Kazhinji isu tine vatengi vanotaurirana nesu kuti vataure yavo yekudziya irisi haishande kana haizoramba ichipisa kunze kwekunge ivo vachiramba vakabata bata knob yakamanikidzwa mukati kupikisa control panel. Kana isu tichidzvanya pfundo mubato resonoid rinomanikidzwa kupfuura kuvhurika mumuviri wevharuvhu saka gasi inoyerera nepasevha yekuchengetedza kuenda kune rotisserie. Zvisinei, tinofanira kuramba takabata vharuvhu yakatsindirwa mukati kuitira gasi kuti irambe ichifamba nemuviri wevharuvhu kutoti iyo solenoid ikaramba yakavhurika. Chitubu mune soleno hachiwanzo bvumidza izvi ndosaka tiine iyo thermocouple.
Gesi Solenoid Kudzivirira Valve muchina wakapusa kwazvo usina kana zvikamu zvinofamba. Mukati memusoro wepamusoro weiyo thermocouple mune simbi dzakasiyana dzakadzvanywa dzichipesana. Kana simbi idzi dzichiita kupisa pamusoro padzo dzega mhedzisiro diki yemagetsi inobhadharisa. Izvi hazvina kunyanya kusiyana neapo isu tichifamba pane kapeti uye tovhundutsa mumwe munhu nekubata. Iyi diki yemagetsi inobhadharisa - iyi millivolt - inofamba nemagetsi tambo yakaputirwa nemhangura kuti isvike pazasi peiyo thermocouple uko painokwiridzirwa kumusoro kuzasi kweiyo solenoid mukati mevhavha yekuchengetedza. Hwaro hweGesi Solenoid Kudzivirira Valve mukati mevhavha yekuchengetedza inewo maoiri emhangura mukati meimba yepurasitiki saka iyo waya yemhangura yekupfeka uye makoiri zvinoita kuti millivolt igadzire magetsi-magineti. Chero bedzi iyo tip yeGesi Solenoid Safety Valve iri ht iyo millivolt inoramba ichigadzira nekutsigira iyo electromagnet. Isu tinofanirwa kumanikidza bhatani revhavha yekuchengetedza kuitira kuti gasi iyerere uye isu tinobata pfundo rakadzvinyirirwa mukati apo isu tinobatidza chinopisa uye tobva tamirira kupisa ikoko kuitisa mune iyo thermocouple uye kugadzira electro-magineti yakasimba zvakakwana kuti ibate solenoid chitubu chakamanikidzwa . Kana electromagnet yangosimba zvakakwana kuti itore tsime retsono yakamanikidzwa tinogona kubvisa ruoko rwedu; hatichafaniri kubata pfundo rakatsindirwa mukati kuti gasi riyerere. Electromagnet inochengeta iyo solenoid yakamanikidzwa saka gasi inoyerera nepavharuvhu. Iyi inonzi vharuvhu yekuchengetedza nekuti vharuvhu inoputika yakavharika uye ichivhara kuyerera kwegesi nekukurumidza kana kupisa kuchinge kusisina kuitisa mune tipi yeGesi Solenoid Safety Valve. Kana isu tikasiya iyo yekutsva yeiyo rotisserie isina kutariswa uye neimwe nzira iyo moto unopisa unobuda hatifanirwe kunetseka kuti gasi richaramba richipomba nekupomba kunze kweye rotisserie burner nekuti nekukurumidza apo muromo weGesi Solenoid Safety Valve isiri conduction kupisa magetsi anonyangarika uye chitubu chinodzvanya solenoid munzvimbo ichivhara kuyerera kwegesi zvakare.s isu tinogona kuona mumufananidzo wekutanga pamusoro apa pane tambo yepombi pane ino Solaire infrared rotisserie burner kuchengetedza valve. Iyo yakasungirirwa yakasungirirwa (inoonekwa pazasi pemufananidzo wechipiri pano neteponi tepi yakatenderedza tambo) screws kupinda mune gasi yakawanda mukati meanodzora pani yeSolaire Infrared Grill Models. Pamusoro peichi chifananidzo ndiko kumanikidza kwakanamatira kune yealuminium gasi mutsetse unomhanya nemuviri wegrill kuendesa gasi kune infrared rotisserie burner. Kumucheto kwevhavha yekuchengetedza pane chivharo chealuminium apo Gasi Solenoid Yekuchengetedza Valve tambo kune vharafu saka hwaro hweiyo thermocouple yakagara mumucheto we solenoid mukati mevhavha.
Solaire chengetedzo vharafu yakatanhamara kuratidza solenoid uye chitubu mukati uye chivharo chinobata Gasi Solenoid Kudzivirira Valve kune iyo solenoid.
Kuti uone iyo Gasi Solenoid Safety Valve isu tinosunungura iyo thermocouple uye tozosunungura chivharo pamuromo weSafety Valve. Zvakanakisisa kubvisa chivharo nebhokisi-kuguma wrench kana chipanera chinogadziriswa nokuti aluminiyamu yakapfava zvikuru uye chipanera chinobatwa nemaoko chinogona kumonya chivharo chinozoparadza tambo.
Iine kapu yabvisa solenoid inowanzo kutsvedza ichibva kunze kwemukati sero nenzira inoratidza mumufananidzo uyu. Iyo base yakaiswa kuti ive mune kapu yeiyo thermocouple kukwira mune inverted round cap uye iyo chitubu neplate yayo iyo inovhara kuyerera kwegasi yakatarisana nevhavha yevhavha kumberi kwevhavha.
Kana Gasi Solenoid Chengetedza Valve isingachashande nemazvo isu tinogona kazhinji kubvisa kapu uye kutsvedza-kunze iyi solenoid kuti tione kuti rudzii rwekukuvara kwakaitika. Kazhinji grill inopisa yakabata moto kana ine yakaipa convectional circulation ichange yakanyanyisa solenoid uye imba yepurasitiki yakakomberedza makoiri emhangura inenge yave yakakuvadzwa zvisingagadziriswi nekupisa. Izvi zvinowanzonyatsojeka kune ziso rakashama. Kupisa-kupisa solenoid kunoratidza kurwiswa kuri pachena kune imba yepurasitiki. Zvakare kukuvara kudiki kunogona kusiya tsvina, grime kana yakanyanyisa-kupisa lubrication mudzimba kune solenoid iyo inoda kucheneswa kuitira kuti solenoid ifambe yakasununguka uye nyore kushandiswa nemagetsi emagetsi.
Kudzivirirwa Gasi Gesi Solenoid Valve
Kudzivirirwa kweGesi Gesi Solenoid Valve RDQP8.5-Y2nguva yepamusoro thermocouple chengetedzo solenoid vharuvhu RDQP8.5-Y2 Gasi Kudzivirirwa Gasi Solenoid Valve katoni bhokisi, makatoni makumi matatu mudanda remapuranga.
Gasi Geyser Magnetic Valve Magnet Valve
Thermocouple uye magineti vharafu inoumba flameout kuchengetedza inodzivirira iyo inoshandiswa zvakanyanya mugasappliance, senge gasi cooker, gasi oveni, gasi chitofu, gasi heater uye zvichingodaro. Kugamuchirwa kutenga Gas Geyser Magnetic Valve Magnet Valve kubva kwatiri. Chese chikumbiro chevatengi chiri kupindurwa mukati meawa makumi maviri nemana.
Kubika Appliance Oven Solenoid Valve
Kubikira Appliance Oven Solenoid Valve RDFH10.5-B kuchengetedza kudzora gasi magineti vharafu yekubikira mudziyo weovheni zvikamu gasi geyer remagnetic valve magineti valve. Ndokumbira titumire iyo dhizaini ine qtys uye zvinodiwa, tozotarisa Mutengo wako mukati memazuva maviri.
Solenoid Valve yeGasi Cooker
Solenoid vharafu RDQP8.5-Y2 yegasi rinobika, Solenoid Valve yeGasi Cookerï¼Œheater zvikamu-gasi gasi solenoid vharagi. Tigamuchire kutenga Solenoid Valve yeGesi Cooker kubva kwatiri. Chikumbiro chega chega kubva kune vatengi chiri kupindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana.
Aokai inyanzvi Gasi Solenoid Safety Valve vagadziri uye vatengesi muChina. Zvigadzirwa zvedu ndezve CE Certified. Mukuwedzera, isu tinopawo sampuli yemahara. Unogona kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogara nemutengo wakaderera kubva kufekitari yedu. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu zvemhando, ndapota taura nesu nekukurumidza. Tarisira kushanda newe! Gamuchira shamwari kubva kumativi ese ehupenyu anouya kuzoshanya, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.